Ra’iisal wasaaraha Ethiopia oo booqoshadiisii ugu horeysay ku tagaya Mareykanka - Wargane News
Home Somali News Ra’iisal wasaaraha Ethiopia oo booqoshadiisii ugu horeysay ku tagaya Mareykanka
Ra’iisal wasaaraha cusub ee Ethiopia Aby Ahmed ayaa booqasho rasmi ah oo qaadan doonta mudo labo maalmood ah ku tagi doona Mareykanka 28-ka July 29-,sida uu sheegay sarkaal ka tirsan xukuumadda Ethiopia arbacadii shalay.
Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Arrimaha dibadda Ethiopia Amb: Birtukan Ayano, oo warbaahinta caalamiga iyo mida gudaha la hadlayay ayaa sheegay in Aby Ahmed la filayo inuu la kulmo mas’uuliyiin sar-sare oo ka tirsan Dowladda Mareynkanka,Wakiillo ka socda Beesha caalamka iyo qaar ka mid ah Jaaliyadda Ethiopia ee ku nool dalka Mareynkanka.
Safarka uu Ra’iisal wasaaraha Ethiopia uu ku tagayo Mareynkanka ayaa khuseeya si loo kobciyo wadahadal iyo isku dheelitir dhexmara dawladda Ethiopia iyo bulshada Itoobiyaanka ah ee Maraykanka ku nool.
Aby Ahmed ayaa sidoo kale la filayaa in uu wadahadal la yeesho saraakiisha Mareykanka ee muhiimka u arka dadaalka lagu doonayo in lagu heshiisiiyo Ethiopia iyo Eritrea.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sidoo kale la filayaa in uu wadahadal la yeesho saraakiisha Mareykanka oo ku saabsan iskaashigooda laba-geesoodka ah ee la-dagaallanka argagixisanimada.
Xukuumadda Washingtong iyo Ethiopia,waxaa ka dhaxeeya iskaashi adag oo ku saabsan la dagaalanka argagixisada,iyadoo labada dalka ay hadda ka shaqeynayaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab oo ah koox argagixiso oo xidhiidh dhaw la leh Al-Qaa’idda.
Xaaji Cabdi Waraabe Oo Goor Dhaweyd Ku Geeriyooday Magaalada Hargeisa